खाटमा सहबास की युद्,ध - Muldhar Post
पत्रपत्रिका खबर २०७७, १६ फाल्गुन आईतवार 128 पटक हेरिएको
दमकका ३२ वर्षीय विक्रम (नाम परिवर्तन) ले पारिवारिक दबाबका कारण मागी विवाह गरे। लामो अन्तरालपछि दम्पतीबीच शारीरिक सम्बन्ध कायम भयो। यौनेच्छा हुने तर सन्तुष्टि नपाउने भएपछि उनी भित्रभित्रै तनावमा हुन्थे। बिस्तारै उनको यौनचाहना पनि घट्न थाल्यो। लामो समयसम्म आफ्नो समस्या कसैलाई बताएनन्। ‘तीनचार वर्षपछि उनी परामर्शका लागि मकहाँ आए,’ विक्रमको उपचार गरेका यौन मनोविद् डा. सुबोधकुमार पोखरेलले भने, ‘विक्रममा मानसिक अन्योल थियो। त्यसैले उनले भरपूर यौन आनन्द लिन सक्दैनथे।’ यसरी आफ्ना यौन समस्या लुकाएर बस्दा समस्याको जरो पत्ता लगाउन नसकिने डा. पोखरेलले बताए।
‘विवाहित, अविवाहित, लैंगिक अल्पसंख्यक जोसुकैमा पनि यौन समस्या हुन्छ,’ डा. पोखरेलले भने, ‘आफूमा यस्तो समस्या भएकाहरू समाज या विभिन्न कारणको डरले खुलेर बोल्न सक्दैनन्। खुलेर आफ्ना समस्या बताउँदा विभिन्न खाले यौन रोग वा यौन समस्याबाट समयमै बच्न सकिन्छ।’ यसका लागि औषधिभन्दा परामर्श उपयोगी हुने उनले बताए। यौन मनोविद् डा. पोखरेलका अनुसार पछिल्लो समय नेपालीहरू यौनका विषयमा सहजै खुल्ने गरेका छन्। ‘समाजमा आफ्नो लाज हुने या पार्टनरले असहज मान्ला भन्ने भयले मानिसहरू यस्ता समस्या लुकाएर बस्थे,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ परामर्श लिन पनि लुकीलुकी आउँथे। तर, अचेल किशोरकिशोरीदेखि प्रौढहरू पनि खुलेरै आफ्ना समस्या प्रस्तुत गर्न थालेका छन्।’
काठमाडौँ, सिनामंगलस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी) मा दैनिक एक सयभन्दा बढी यौन रोग तथा यौन समस्या भएका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको केमसीका वरिष्ठ यौनरोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द पोखरेलले बताए। उपचारमा आउनेमध्ये अधिकांशमा ‘सेक्सुअल्ली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन (एसटीआई) छ,’ डा. गोविन्दले भने, ‘कतिपय भने यौन मनोसमस्या भएर परामर्शका लागि आउँछन्।’ उनका अनुसार यसमा विवाहित र अविवाहितको संख्या उस्तै–उस्तै छ। तर, उपचारका लागि भने महिलाभन्दा पुरुष बढी आउने गरेको उनले बताए। ‘पुरुषको तुलनामा महिलामा यौनरोगको लक्षण ढिला देखापर्छ,’ उनले भने, ‘महिलाले आफ्नो समस्या खुलेर भन्न पनि अप्ठ्यारो मान्छन्। त्यसैले महिलाभन्दा पुरुष बढी आउँछन्। तर, पुरुषमा भन्दा महिलामा यस्तो रोगको जोखिम अत्यधिक हुन्छ।’
यौन रोग र समस्याका विषयमा धेरै बिरामीले ‘डाक्टर सपिङ’ गर्ने गरेको उनले बताए। ‘एउटा डाक्टरकोमा गयो, एउटा कुरा सुन्यो, अर्को डाक्टरकोमा गयो, अर्को कुरा सुन्यो,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘त्यसलाई हामी ‘डाक्टर सपिङ’ भन्छाँै। उनीहरूको दिमागले सानो समस्यालाई पनि ठूलो बनाइदिएको हुन्छ र हत्तपत्त कसैको कुरामा विश्वास गर्दैनन्।’यौन समस्यालाई लिएर चिकित्सकहरूलाई बारम्बार सोधिने केही जिज्ञासा यस्ता छन्ः १) यौन सम्पर्कका बेला मेरो वीर्य चाँडै स्खलन हुने गरेको छ। श्रीमती बेलाबेलामा झर्किने गर्छिन्। यौन सम्पर्कको अवधि कति हुनुपर्ने हो ? शीघ्र पतन रोक्ने केही उपाय बताइदिनुभए आभारी हुने थिएँ। २) म २५ वर्षीय युवा हुँ। सम्भोगको इच्छा र चाहना हुँदाहुँदै पनि सेक्स गर्न सक्दिनँ। मेरो लिंग कडा नै हुँदैन। तीन वर्षदेखि मलाई यो समस्या भएको हो। म के गरूँ ?
३) हाम्रो बिहे भएको पाँच वर्ष भयो। हामी सुखी थियौँ। तर, अहिले उहाँ असाध्यै पिउनुहुन्छ। एक वर्षदेखि उहाँले मलाई यौनसुख दिन सक्नुभएको छैन। उहाँमा यौन चाहना नै छैन। कहिलेकाहीँ कोसिस गर्नुहुन्छ तर उहाँको लिंग उत्तेजित नै हुँदैन। केही सीप नलागेपछि त्यत्तिकै सुत्नुहुन्छ। आजभोलि त मलाई झर्को लाग्ने, सानो–सानो कुरामा रिस उठ्ने हुन्छ। अझ बेलुका व्यर्थको कोसिस गर्दा म कराइदिन्छु। के गर्ने होला ? उहाँको उपचार हुन सक्ला ? ४) म २५ वर्षीय युवा हुँ। सम्भोगको इच्छा र चाहना हुँदाहुँदै पनि सेक्स गर्न सक्दिनँ। मेरो लिंग कडा नै हुँदैन। तीन वर्षदेखि मलाई यो समस्या भएको हो। त्यसअघि मैले दुईतीन पटक सम्पर्क गरेको थिएँ। तर, हतारहतार र डराई–डराई सेक्स गरेकाले मैले मेरो पार्टनरलाई सन्तुष्टि दिन सकिनँ। मलाई हीनताबोध हुँदै गयो। र, सेक्स भन्नेबित्तिकै मेरो सातो जान थाल्यो।
शीघ्र स्खलन नियन्त्रण सम्भव भएको डा. शाक्य बताउँछन्। यौनसम्पर्कको क्रममा वीर्य स्खलन होलाजस्तो भयो भने लिंग बाहिर निकाल्ने अनि फेरि चालु गर्ने, पार्टनरको अंगमा ध्यान नदिने, यौन क्रीडा रोकेर ध्यान अर्कैतर्पm मोड्ने, महिला माथि पुरुष तल भएर यौन क्रीडा गरेमा स्खलन ढिलो हुने हुनाले आसन परिवर्तन गर्ने, स्खलन हुन लाग्दा पार्टनरलाई गति कम गर्न संकेत गर्ने, स्खलन होलाजस्तो भयो भने लिंगको फेदमा अँठ्याउने, अण्डकोष र मलद्वारबीचको वीर्यनली थिच्ने, कम चिप्लोयुक्त बाक्लो खालको कन्डम प्रयोग गर्नेजस्ता विधि अपनाए शीघ्र स्खलनको समस्या बिस्तारै हट्ने डा. शाक्य बताउँछन्। यसका साथै लिंगवरिपरिको मांसपेशीको कसरत, हस्तमैथुन गर्दागर्दै वीर्य स्खलन रोक्ने अभ्यासले पनि शीघ्र स्खलन घटाउन सकिने उनको भनाइ छ।
यसका लागि दृढ अठोट एवं धैर्यका साथै पार्टनरको सहयोग र समझदारी पनि आवश्यक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यौन समस्याको तुः समाधान गर्ने भनेर प्रचारप्रसार गरेर बसेकाहरूले यी सबै कुरा बताउँदैनन्। उनीहरू शीघ्र पतन रोक्ने भन्दै महँगा औषधि भिडाएर मानिसलाई ठग्छन्।’डा. शाक्यका अनुसार जिज्ञासा नम्बर ३ र ४ मा उल्लेख गरिएका समस्या ‘इरेक्टाइल डिस्फंक्सन’ हुन्। चिन्ता, हीनताबोध र मानसिक तनावले यस्तो समस्या हुने गर्छ। यसको उपचार सम्भव छ। यसका लागि मनोविदसँग परामर्श लिनुपर्छ। लिंग कडा पार्ने औषधि सेवन गरेर, चिकित्सको परामर्शबिना भायग्रा सेवन गरेर मात्र यो समस्याबाट छुटकारा पाउन नसकिने डा. शाक्य बताउँछन्।
जति धेरै पार्टनर, उति धेरै रोग-केही महिनाअघि विदेशबाट फर्किएका एक जना युवा उपचारका लागि यौनरोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द पोखरेल कहाँ आए। विदेशमा हँुदा उनी उपचार नगरी आफ्नो समस्या लुकाएर बसेका थिए। चेकजाँचका क्रममा ती युुवामा ‘हेपाटाइटिस बी’ देखापर्‍यो। ‘उनमा सामान्य इन्फेक्सन बल्झेर हेपाटाइटिस बी भएको थियो,’ डा. गोविन्द सुनाउँछन्, ‘पछि पत्ता लाग्यो, उनका एकभन्दा बढी सेक्स पार्टनर रहेछन्।’ एकभन्दा बढीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दा मानिस यौनरोग र यौन समस्याको शिकार हुने उनी बताउँछन्। ‘एउटै पार्टनरसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दा रोग सर्ने सम्भावना कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘धेरै सेक्स पार्टनर हुँदा रोगसँगै यौनका अन्य समस्या पनि देखिन थाल्छन्।’
वर्षमा १२ चोटि जाँच -डा. गोविन्दकहाँ एक दिन ३५ वर्षीय रामसुन्दर (नाम परिवर्तन) परामर्शका लागि आए। ‘उनले चिनजानकी एक जना महिलासँग शारीरिक सम्बन्ध राखेछन्,’ डा. गोविन्दले भने, ‘ती महिला कुनै पेशेवर यौनकर्मी थिइनन्। तर, रामसुन्दरलाई यौन रोग लागेको भ्रम पैदा भएछ।’ रामसुन्दरले वर्षमा १२ पटकभन्दा बढी चेकजाँच गराइसके। तर, उनको डर रत्तिभर कम भएको छैन। उनी निकै ठाउँमा मनोपरामर्श लिन पनि गइसके। अहिले पनि उनलाई यौन रोग लाग्यो कि भनेर दिनरात सताइरहन्छ । ‘हामीले केही भएको छैन भनेर रिपोर्ट हातमा थमाइदिँदा पनि उनले हाम्रो विश्वास गरेका छैनन्,’ डा. गोविन्दले भने। डा. सञ्जुबाबु श्रेष्ठकहाँ एक जना बिरामी आए। ‘धेरै समयदेखि उनी मानिसक रोग लाग्यो भनेर मानसिक अस्पताल धाइरहेका रहेछन्,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘जाँच गरेर हेर्दा उनमा भिरिंगी भएको रहेछ। उपचारपछि उनी शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा निको भए।’
सेक्स समस्या लिएर चिकित्सककहाँ पुग्ने अधिकांशको चिन्ता सन्तुष्टि पाउन नसकेको, यौन सम्पर्कका बेला शीघ्र स्खलन हुने गरेको, लिंगमा उत्तेजना नआउने गरेको आदि हुन्छन्। लिंगको आकार, शीघ्र स्खलन, हस्तमैथुनको असरलगायत विषयमा जिज्ञासा राख्ने र श्रीमतीलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिँदैन कि भनेर मनमा डर पालेर बसिरहेका धेरै युवा परामर्शका लागि आउने गरेका चिकित्सकहरू बताउँछन्। डा. सुबोधकुमार पोखरेलका अनुसार यौनका केही आम समस्या छन्। जस्तैः पुरुषमा लिंग कडा नहुने, शीघ्र पतन हुने, यौन इच्छा कम हुने, केहीलाई सामान्यभन्दा बढी यौन चाहना हुने आदि। महिलामा योनि सुक्खा हुने, यौन चाहना नहुने, सेतो पानी बग्ने अनि केहीमा यौन चाहना सामान्यभन्दा बढी हुने।
खुल्दै छ समाज-यौन रोग र समस्याका बारेमा मानिसहरू पहिलेभन्दा खुल्न थालेको डा. सञ्जुबाबु श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘पहिला मानिसको कुरा कोट्याउन एक घण्टा हिस्ट्री लिनुपथ्र्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले जस्तो समस्या आए पनि सबैले खुलेर आफ्ना समस्या राख्छन्। लुकाएर अन्तिम अवस्थामा आउनेहरू पहिलाभन्दा अहिले घटेका छन्।’
सेक्सोलोजिस्ट डा. बद्रीप्रसाद भट्टराईकहाँ दैनिकजसो २०÷२५ जना बिरामी यौनको समस्या लिएर आउँछन्। ‘योनि खुकुलो भयो अब के गर्ने ? हस्तमैथुनका बेफाइदा केके छन् ? महिलामा चरम आनन्द भएको कसरी थाहा पाउने ? वीर्य सेवन गर्दा के हुन्छ ? गर्भवती अवस्थामा सेक्स गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर प्रत्येक दिन मानिसहरू आउने गरेका छन्,’ डा. भट्टराई भन्छन्। उनी हाल मान्छेहरू यौनको विषयमा खुल्न थालेको बताउँछन्। ‘अपेक्षित रूपमा मानिसहरू अझै यौनका विषयमा खुल्न सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, पहिलेको तुलनामा समाज बिस्तारै खुल्दै छ।’डा. गोविन्दकहाँ पनि आजभोलि यौनरोगीहरू खुलेर आउन थालेका छन्। ‘पहिलेको तुलनामा मानिसहरू चिकित्सकसँग खुलेर आफ्ना समस्या बताउन थालेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, पुरुषको तुलनामा महिलाहरू यस्ता कुरामा प्राइभेसी राख्न खोज्छन्।’
अविवाहित अथवा यौन सम्पर्क नराखिसकेको उमेरमा भन्दा यौन सम्पर्क राख्न थालेपछि यौनक्रियाकै कारण वा यथोचित सरसफाइको कमीमा योनि चिलाउने, सेतो पानी बग्ने र पिसाब पोल्नेजस्ता समस्या हुन सक्छन्। नवविवाहित महिला अक्सर यस्तै गुनासो लिई चिकित्सककहाँ आउँछन्। यस्तो समस्या दोहोरिरहेमा यौनक्रियापूर्व दुवै जनाले पिसाब एकसरो फेर्ने, यौन क्रियाअघि पुरुष पार्टनरको यौनांगो टुप्पासम्मै राम्ररी सफा गर्न लगाउने, यौनक्रियापछि महिला पार्टनरले औँला छिराई यौनांग सफा गर्नुका साथै फेरि एक पटक पिसाब फेर्ने, भित्री पहिरनहरु नियमित फेर्ने गरेमा योनि चिलाउने तथा पिसाब पोल्ने समस्या हट्छ। विवाहको केही समयपछि कतिपय महिलामा यौनेच्छा कमी हुने गरेको पाइएको छ। एकान्तको अभाव, जागिरसँगै घरको कामको थकान, महिनावारी पूर्वको तनावका कारण यौनकार्यमा मज्जा लिन नपाएको गुनासो सुनिन्छ। आफूलाई इच्छा नहुँदानहुँदै पनि यौनकार्यमा सहभागी हुनुपर्दा पनि यौनदेखि वितृष्णा जागेको गुनासो पनि सुन्न पाइन्छ।
कन्डम प्रयोगले यौन आनन्दमा कमी आउने भने आ–आफ्नो अनुभूतिको कुरा हो। कन्डमको फाइदाको सवालमा यसले यौनानन्द कम गर्छ भन्ने धारणा गौण हो। सही तरिकाले भण्डारण गरी नबिग्रिएको र म्याद नगुज्रिएको कन्डम ठीक तरिकाले लगाइएको छ भने कन्डम फुट्ने सम्भावना हुँदैन। कन्डमलाई विसर्जन गर्नुअघि फुटे÷नफुटेको राम्ररी जाँच गर्नुपर्छ। कन्डम फुटेको भए आकस्मिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नुपर्छ।
महिला र पुरुषबीचको उत्तेजना एवं चरमसुखको फरकपनका कारण प्राक्क्रीडाको छुट्टै महत्त्व छ। यस विषयमा पुरुष पार्टनरले बढ्ता बुझ्नु जरुरी छ। प्राक्क्रीडाको क्रममा एकअर्कालाई सुम्सुम्याउनेदेखि चुम्बन गर्ने, अँगालो मार्ने, हल्का चिमोट्ने, टोक्ने, दबाउने, काउकुती लगाउने कार्य गर्न सकिन्छ। मधुरो प्रकाश, हल्का पफ्र्युम, सुमधुर संगीतले थप मादकता प्रदान गर्छ। रोग र यौन समस्या नितान्त फरक कुरा हुन् । यौन रोग भनेको सरुवा, वंशाणुगत हुन सक्छ। भाइरस र लुतो आदिबाट लाग्छ। जसको औषधि उपचार गराउनैपर्छ। कतिपय यौन रोग निको पार्न सकिन्छ भने कतिपय रोगको उपचार छैन।
यौनको हिसाबमा तेस्रोलिंगी, ट्रान्सजेन्डर, होमोसेक्सुअललगायत अल्पसंख्यक लैंगिकता भएका व्यक्ति सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। किनकि, उनीहरूलाई हाम्रो समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण खराब छ। सोही डरले उनीहरूले आफ्ना समस्या लुकाउँछन् र झनै पीडित बन्छन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र मिडियाले यौनका विषयलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। जसका कारण विगतको तुलनामा मानिसहरू आफ्ना समस्या लिएर आउँछन्। उनीहरू आफ्ना यौनका विषयमा उत्सुक देखिन्छन्। मानवीय यौनिकता एक व्यावहारिक र बहुआयामिक पक्ष भएकाले परामर्शद्वारा यसको उपचार गर्न सकिन्छ। लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि समाज र राज्यले केही न केही गर्नुपर्छ। हैन भने समस्या झन् थपिँदै जान्छन्। सम्पूर्ण साप्ताहिकबाट साभार ।